३ हप्ता नेपालको लागि अत्यन्तै कठिन अवस्था हुने : डा. रविन्द्र पाण्डे - Nepalkakura
Home गृहपृष्ठ स्वास्थ्य ३ हप्ता नेपालको लागि अत्यन्तै कठिन अवस्था हुने : डा. रविन्द्र पाण्डे
यसैगरी, उनले जीवनको तुलनामा दुःख सानो भएकाले खाद्यान्न किन्न दैनिक बाहिर ननिस्किन पनि सुझाव दिएका छन् । डा. पाण्डेले पसल, बाटो, चोक, खेल्ने ठाउँ, गल्ली सबैतिर संक्रमित भएकाले बाहिर निस्कनै परेको अवस्थामा डबल मास्क लगाएर मात्रै निस्किन आग्रह गरे ।
उनले ६ फिटभन्दा धेरै दुरी कायम गर्ने, साबुन पानी÷स्यानिटाइजरले निरन्तर हात सफा गरेर गर्ने, भेटघाट बन्द गर्ने जस्ता स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाउन पनि सवै नागरिकलाई अपिल गरेका छन् । यसपटकको कोरोना भाइरसको प्रजातिलाई नजरअन्दाज नगरी सरकारले गरेको कडाइलाई साथ दिँदै सेल्फ लकडाउनमा बस्न पनि डा. पाण्डेले आग्रह गरेका छन् ।
Previous article२४ घन्टामा काठमाडौं उपत्यकामा कोभिड १९ का ३ हजार ९२७ जना नयाँ संक्रमित
Next articleअभिनेता मदनकृष्ण श्रेष्ठले मनाए अस्पतालमै जन्मदिन